Rindrankajy mpitsara tsipelina malagasy : comments » What if ...
Friday, October 31, 2008 - 01:58:46
misaotra anao ny fiangonana :)
Friday, October 31, 2008 - 01:59:39
ary mahay teny ratsy lery an :P
Friday, October 31, 2008 - 09:29:27
Tsia, tsy mahalala teny ratsy io rindrankajy mpitsara tsipelina io. Raha ny teny toy ny hoe mamany, mangery, vody, sy ny mivantambantana kokoa noho ireo no eritreretinao ho teny ratsy dia tsy teny ratsy ireny fa teny tsara. Ny hoe mipipy, mikakà, anus no teny ratsy satria avy amin’ny teny vahiny nogasiana ireny, na teny vahiny mihitsy aza.
Friday, November 7, 2008 - 12:12:48
misaotra betsaka fa tena tsara dia tsara, mieritreritra ireo gasy rehetra sahirana sy mampiana-janaka aho eto, misaotra dot a !
Friday, November 7, 2008 - 12:28:13
Misaotra betsaka fa manome toky indray ireo izay mbola misalasala ny hanapariaka lahatsoratra amin’ny teny Gasy.
P.S: tsy fantany ny teny hoe “hanapariaka” ;)
Friday, November 7, 2008 - 12:36:45
Dia tsy misy fisaorana re tompoko fa ny feedback avy aminareo no fisaorana tsara indrindra.
Friday, November 7, 2008 - 13:09:10
hip hip hip hip hurray hianatra teny gasy amizay zao!
Friday, November 7, 2008 - 18:50:13
Matotra lesy, tsy maintsy hoe ho ao matetika ihany izany.
Et si ... le Tiako I Madagasikara était carré. »
« Suddenly ... Fo mitambatra